Daawo Xisbiga Shacabka Geeska Afrika Oo Ka Hadlay Siyaasada Dalka iyo Doorashada Soo aadan | cowslafil news network
Posted by cowslafil On October 31, 2015 0 Comment
Suldaan Bashiir Maxamed Geelle oo ah Gudoomiyaha Golaha Marjaca ee Xisbiga Shacabka Geeska Afrika ayaa ka hadlay, doorashada Sanada 2016-ka ee soo aadan iyo doorka Xisbigaas uu ku lahaan karo wax k bedelidda siyaasadda Dalka.
Suldaanka oo ah shaqsi howla badan ka soo qabtay maamuladii dalka soo maray, haddana ku dhaqan dalka Norway ayaa mar walba ku howlan sidii Soomaali loo mideyn lahaa, wax wada qabsi muuqda oo dalka iyo dadkaba wax tara loo qabsan lahaa. Suldaan Bashiir waxaa kaloo uu xubin ka yahay golaha marjaca Dalada Soomaalida ku dhaqan Norway, waa gudoomiyaha Golaha Marjaca Dalada Norway.
Suldaan ayaa isagoo qibradaha badan oo uu u leeyahay maamul, arrimaha siyaasada iyo Bulshada ayaa wuxuu kale uu ka hadlay dhibaatooyin badan oo jira iyo sida ay la tahay ee ay Umada Soomaaliyeed looga gudbin karo.
Halkan ka daawo video’ga Suldaan Bashiir Mohamed Geele:
Previous:Hay’adda Monitoring Group oo ka hadashay dhibaatada iyo xusuuqa loo geystay shacabka Kabxanley iyo Deefoow.
Next: Dagaal ka dhacay Kabxanle ee Gobolka Hiiraan